Qoorqoor oo qasab kula heshiiyay RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Dadaallo ay wadeen Qoorqoor iyo dhiggiisa Lafta-gareen oo lagu doonayay in lagu xaliyo is-maandhaafka ayaa soo dhammaaday natiijo la’aan, inkastoo Puntland ay ku dhawaaqday inay isku dayeyso inay dhexdhexaadiso.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariye Qoorqoor, ayaa heshiis ka gaaray khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay kadib shaqo ka raacdeyntii Agaasimihi hore ee NISA, eedeysane Fahad Yaasiin.
Ilo xog ogaal ah oo u dhuun daloola kulanka ayaa Keydmedia Online u sheegay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in meel la iska dhigo dhammaan kala aragti duwanaanshaha isla markaana laga wada shaqeeyo doorashada dalka iyo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda siyaasadeed eeMuqdisho ka aloosan.
Qoorqoor ayaa ka mid ahaa dhinacyadii ku howlannaa xallinta khilaafka Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Rooble, balse waxaa lagu eedeeyay inuu la saftay Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, taasoo ka careysiisay Ra’iisul Wasaaraha.
Siyaasiyiinta iyo shacabka reer Galmudug, ayaa horay ugu dhaliilay Qoorqoor, in uusan door wanaagsan ka ciyaarin khilaafka Farmaajo iyo Rooble, isla markaana uusan dhexdhexaadin dhinacyada uu xiriirkoodu gaaray meeshii ugu hooseysay.
Ilo ku dhow Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa KON u sheegay in Khilaafka u dhexeeya Ra'iisul Wasaare Rooble iyo Farmaajo uu qaadan karo bilooyin si loo soo afjaro maadaama kiiska Sarkaalka NISA ee la dilay Ikran Tahliil uu dabka ku sii shiday.
Ikraan oo 25 -jir ah ayaa la waayay 26 -kii bishii June ee sannadkan kaddib markii laga afduubtay gurigeeda oo ku yaalla agagaarka Xarumaha NISA, hoggaankii hore ee hay’adda ayaa sheegay in ay Ikraan dileen Al-Shabaab, mana jirto wax caddeyn ah oo ay arrinkaas u keeneen, Al-Shabaab ayaa dhankooda iska fogeeyay dilka Ikraan.
Qoorqoor, oo ah nin midibbo badan, kuna shaqeeya awaamiirta Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa markii ugu horreysay odayaasha iyo siyaasiyiinta HABARGIDIR, ka codsaday in ay la heshiisiiyaan RW Rooble, kadib markii si cad loogu sheegay in uusan dib danbe uga talin doonin gobolka Mudug, isla-markaana Dhuusamareeb iyo Gureceel ay qarka u fuuleen in ay dib ula wareegaan Urur-kii Ahlu-sunna.